Manoratra ho an'ny olona tsy mamaky | Martech Zone
Alatsinainy Martsa 28, 2011 Alarobia, Oktobra 29, 2014 Douglas Karr
Tamin'ity herinandro ity, namaly ny hevitro tao amin'ny Facebook aho (ok… adihevitra izany) ary namaly avy hatrany ny mpanoratra… “Ka manaiky izahay!”. Nahatonga ahy hiverina sy hamerina hamaky ny heviny. Menatra aho nahita ny fomba nahatsiravina nataoko tamin'ny valin-teniko - tena tsy azoko ireo hevi-dehibe nolazainy.
Taty aoriana, nahita hevitra tao amin'ny bilaogiko aho izay nanapoaka ahy… fa raha ny tena izy dia tsy nitovy tamin'ny hevitro izay nosoratako. Tena manondro olana lehibe amin'ny Internet izany - tsy mamaky teny ny olona intsony. Tsy resaka hakamoana izany na hadalana… Tena mino aho fa tonga ny fotoana. Tonga any amin'ny pejinao ny olona, ​​mijery ary tonga amin'ny famaranana.
Ny tena tondroiny dia ny filàna ny fandefasana hafatra amin'ny Internet fahatakarana lehibe indrindra. Mila sary ny tranokalanao - na izany sary na horonan-tsary - mba hahafahan'ny mpamaky mijery ny atiny, atambatra amin'ny sary, ary mitazona tanteraka ny fampahalalana izay ezahinao hampitaina amin'ny alàlan'ny hafatra. Tsy ampy ny manoratra lahatsoratra 500 intsony.
Manoro hevitra ny mpanjifa aho mba hanao fitsipika 2 segondra amin'ny pejiny. Manàna olona tsy mbola tany amin'ny tranokalanao talohan'ny nidinan'ny tranokala ary alefaso amin'izy ireo mandritra ny 2 segondra ny tranokala.
Inona no hitan'izy ireo?
Nisy hafatra afovoany ve?
Nitazona ny iray tamin'ireo fampahalalana ve izy ireo?
Fantatr'izy ireo ve izay hatao manaraka?
Tsy hoe tsy maka fotoana ny rehetra - fa maro kosa no tsy manao izany. Ary ireo mpamaky ireo dia mety ho kandidà tonga lafatra amin'ny vokatrao na serivisinao.
Tags: fanehoan-kevitrain-pivarotanamarketing amin'ny fivarotanaoogwave